Kedu ihe ndekọ mpụ? | Law & More BV
blog » Kedu ihe ndekọ mpụ?
Kedu ihe ndekọ mpụ?
Emebi iwu corona wee rie gị nhá? Mgbe ahụ, ruo n'oge na-adịbeghị anya, ị nọ n'ihe ize ndụ nke ịbụ onye ndekọ ndekọ mpụ. Iwu ego corona na-aga n'ihu na-adị, mana ọ nweghịzi ederede na ndekọ ndị omempụ. Kedu ihe kpatara ndekọ mpụ jiri bụrụ ụdị ogwu n'akụkụ oflọ Ndị Nnọchiteanya na ha họọrọ iwepụ usoro a?
Ọ bụrụ na ị daa iwu, ịnwere ike ịnweta ndekọ mpụ. A na-akpọ ndekọ ndekọ mpụ 'wepụ akwụkwọ akwụkwọ ikpe'. Ọ bụ nyocha nke mmejọ edebanyere aha na Sistemu Documentation System. Ihe dị iche na mpụ na mmejọ dị mkpa ebe a. Ọ bụrụ n ’ime mpụ ọ ga - abụrịrị ndekọ ndekọ mpụ gị. Ọ bụrụ n ’imehie ihe, nke a ga-ekwe omume, mana ọ bụghị mgbe niile ka ọ ga-adị. Mmejọ bụ obere mmejọ. Enwere ike idekọ mmejọ mgbe a na-ata ha ahụhụ site na ikpe nke ihe karịrị EUR 100, mgbasa ma ọ bụ iwu nke ihe karịrị EUR 100. Mpụ bụ mpụ ndị ka njọ, dị ka izu ohi, igbu ọchụ na ndina n'ike. Iwu ego Corona bụkwa mkpebi ikpe ntaramahụhụ karịrị EUR 100. Ya mere, ka ọ dị ugbu a, edetu na akwụkwọ ikpe mgbe etinyere ego corona. Na July, ọnụ ọgụgụ nke ihe karịrị 15 000. Mịnịsta Grapperhaus nke Mịnịstrị nke Ikpe Ziri Ezi na Nche siri ọnwụ na nke a, mgbe ya onwe ya natara ntaramahụ na ya mere ndekọ ndekọ mpụ maka enweghị irube isi na iwu corona na agbamakwụkwọ nke ya.
Ihe ndekọ nke ndị omempụ nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu na ndị omempụ. Mgbe ị na-etinye akwụkwọ maka ọrụ, a na-etinye VOG (Asambodo Ezigbo Omume) oge ụfọdụ. Nke a bụ nkwupụta nke na-egosi na omume gị apụtaghị mmegide nke ịrụ ọrụ ụfọdụ ma ọ bụ ọnọdụ dị n'etiti ọha mmadụ. Ndekọ mpụ nwere ike ịpụta na ịnataghị VOG. Ọ bụrụ otu ahụ, anaghịzi ekwe ka ị rụọ ọrụ ụfọdụ, dị ka onye ọkaiwu, onye nkuzi ma ọ bụ kotima. Mgbe ụfọdụ enwere ike ịjụ visa ma ọ bụ ikike obibi. Insurancelọ ọrụ ịnshọransị nwekwara ike jụọ gị ma ị nwere ndekọ mpụ mgbe ị na-etinye akwụkwọ maka mkpuchi mkpuchi. N'okwu ahụ, iwu ji gị ikwu eziokwu. N'ihi ndekọ mpụ ị nwere ike ị gaghị enweta mkpuchi.
Tonweta na nchekwa nke data omempụ
Maghị ma ị nwere ndekọ ndekọ mpụ? Nwere ike ịnweta ndekọ mmebi iwu gị site na izipu akwụkwọ ozi ma ọ bụ ozi-e na Informationlọ Ọrụ Ozi Ikpe (Justid). Justid bụ akụkụ nke Mịnịstrị nke Ikpe Ziri Ezi na Nchebe. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị n'ihe edere na mpụ gị, ị nwere ike itinye akwụkwọ maka mgbanwe. A na-akpọ nke a arịrịọ maka mgbazi. Arịrịọ ga-ebunye na Office nke Justid. Ga-enweta mkpebi edere na arịrịọ ahụ n'ime izu anọ. Retfọdụ oge njide na-emetụta data ikpe nke mmejọ na ndekọ omempụ. Iwu na-ekpebi ogologo oge ozi a ga-adị. Oge ndị a dị mkpirikpi maka mmejọ karịa mpụ. N'ihe banyere mkpebi mpụ, dịka ọmụmaatụ n'ihe banyere corona mma, a ga-ehichapụ data 5 afọ mgbe ịkwụ ụgwọ zuru oke nke mma.
Ebe ọ bụ na ndekọ ndị omekome nwere nnukwu nsonaazụ ndị a, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịkpọtụrụ onye ọka iwu ozugbo enwere ike ma ọ bụrụ, dịka ọmụmaatụ, ị natala coronafine ma ọ bụ mee ihe ịda iwu. N'ezie, enwere ike ịnwe oge ụfọdụ nke mmegide ga-ezigara onye ọka iwu ọha na eze. Mgbe ụfọdụ ọ nwere ike iyi ka ọ dị mfe karịa ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ kwenyere ọrụ obodo, dịka ọmụmaatụ n'ihe metụtara mkpebi mpụ. Ka o sina dị, ọ ka mma ka onye ọka iwu nyochaa ọnọdụ ahụ. A sị ka e kwuwe, onye ikpe nke ọha na eze nwekwara ike imehie ma ọ bụ guzobe ikpe na-ezighị ezi. Na mgbakwunye, onye ọka ikpe ọha ma ọ bụ ọka ikpe nwere ike ịdị nro mgbe ụfọdụ karịa onye ọrụ gọọmentị nyere iwu nra ahụ ma ọ bụ dekọọ mmejọ ahụ. Onye ọka iwu nwere ike ịlele ma ezi ego a ziri ezi ma nwee ike ịgwa gị ma ọ bụ mkpebi dị mma ịrịọ. Onye ọka iwu nwere ike ide ọkwa nke mmegide ma nyere onye ọka ikpe aka ma ọ dị mkpa.
You nwere ajụjụ ọ bụla gbasara isiokwu a dị n'elu ma ọ bụ ị ga - achọ ịma ihe anyị nwere ike imere gị? Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ ndị ọka iwu na Law & More maka ozi ndị ọzọ. Ọbụna ma ọ bụrụ na ịmaghị ma ị chọrọ onye ọka iwu. Ọkachamara anyị na ndị ọka iwu pụrụ iche n'ọhịa nke iwu mpụ ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka.
Previous Post Mwepu
Next Post Na-agba alụkwaghịm